Soo-Saaraha Golaha Wareegtada Shirkadda Shiinaha Maamulaha & Warshad | KAISHENG PCB
Dahaarka birta: HASL macdanta bilaashka ah Qaabka wax soosaarka: SMT + Lakabyada: 8 Lakabka PCB
Noocyada Kala-Bixiyaha: Hoggaaminta-Bilaash Adeegyada Hal-Joogsi ah: Soosaarka PCB + Qaybaha + Golaha Tijaabinta: 100% AOI / X-ray / Visual Test
Taageerada Teknolojiyada: DFM oo bilaash ah (Naqshadeynta Soo-saarista) Hubi Noocyada Shirarka: SMT, THD, DIP Heerka: IPC-a-610d
Erayoxul: PCB Dadweynaha, Soo-saareyaasha Golaha PCB, Golaha PCB-ka oo raqiis ah, Adeegga Golaha PCB, Nidaamka Golaha PCB
1. Waxaan soo saari karnaa leexasho deg deg ah si aan ula kulanno bixinta 24-saac ee PCB-yada labada dhinac leh, 48-saac 4 ilaa 8 lakab iyo 120-saac 10 lakab ama PCBs ka sareeya. Waxaan kuu badbaadin doonaa waqtigaaga ama kharashkaaga si aan u dhimo oo aan u helno mas'uuliyadda alaab-qeybiyeyaal fara badan oo ay ku jiraan.
2. Waxaan leenahay xakameynta kharashka ee geeddi-socod kasta si aan macaamiisha ugu siino qiime-jaban PCB iyo kulanka PCB ..
3. PCB-yadayada tayada sare leh waxay ka yimaadaan alaabta ceyriinka ah ee aan doorano, qalabka horumarsan ee aan adeegsano, nidaamka aan u raaceyno nidaamka aan raaceyno, maamulka aqoonta leh oo u hogaansama iyo dhamaan xirfadleyda aan heyno.
4. Waxaan bixinaa adeeg PCB ah oo kajawaabis deg deg ah iyo jawaab deg deg ah oo ku saabsan baaritaanka PCB. Nooc laba geesood ah oo loo yaqaan 'PCB', waxaan ku taageernaa 24 saac adeeg degdeg ah.
Adeegga PCB ee soo noqoshada degdegga ah
Jawaab deg deg ah ee baaritaanka PCB
24 saac adeeg degdeg ah
Golaha PCB qiimo jaban
Faa'iidooyinka loogu talagalay Golahayaga Volume PCB:
• Dhamaan PCB-yada qaawan waa 100% tijaabo (E-test, Solderability test, FQC iyo iwm).
• U soo bandhig adeegga nooca PCB nooc ah si loo tijaabiyo ka hor inta aan la soo saarin tirada.
• Bilow wax soo saar ballaaran ama mar labaad soo saar wax soo saar ururinta PCB ka dib markii macaamilku ka gudbo dhammaan imtixaannada.
• Kormeerka AOI iyo kormeerka muuqaalka ah inta lagu gudajiro isku imaatinka PCB.
• Haddii la helo wax dhibaato ah oo ku saabsan shirarka, injineeradayada khibradda leh ayaa xallin kara ka hor inta aan la rarin.
• Waxaan leenahay koox khibrad sare leh si aan u xallino dhammaan dhibaatooyinka isku imaatinka isla markaana aan kuugu soo dirno adiga PCB-yada tayada leh waqtigooda.
Tirada Adeegyada PCB
Annagu ma cayimin tirada amarada PCB. Waxaad si deg deg ah u rogi kartaa nooc PCB. Macno malahan hadii tiradu tahay hal xabbo oo keliya. Waxaan bixinaa qaybo yaryar iyo kuwa dhexdhexaad ah iyo amarro waaweyn.
Kaliya ma lihin wax shuruud ah iyo xaddidaad tiro, laakiin si kasta oo ay u badan tahay amarku, waxaan bixinnaa adeegyo wax soo saar PCB oo qiimo jaban oo dhakhso leh wax soo saar leh iyo adeegyo isugu jira sidii hore.
Awooda wax soo saar, kharashyada shaqaalaha, kharashyada iibsiga ee qaybaha dayactirka iyo arrimo kale, kuma soo jeedinayno inaad si dhakhso leh isugu uruuriso PCBs meelo kale. PCBFuture waxay leedahay faa'iidooyinka gaarka ah ee qiimaha hooseeya, tikniyoolajiyadda wax soo saarka fiican, iyo keenista waqtiga ku habboon.
Himilada socota ee PCBFuture waxay caawimaad u tahay macaamiisheenna soo saaridda alaab tayo sare leh oo leh faa'iidooyinka ugu tartamaya ee soo-saaristooda. Fadlan la xiriirsales@pcbfuture.com mashruucaaga soo socda.
Hore: Iskuxirka guddiga xakamaynta
Xiga: Golaha Ems PCB